प्रधानमन्त्री सच्चिए दाहाल–नेपाल पार्टी एकताकै पक्षमा
नेपालगन्ज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल—नेपाल समूहका नेता योगेशकुमार भट्टराईले आफ्नो समूह अहिले पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री
चाक्चाकुर : चाड कि भ्रम ?
समय परिस्थितिले नयाँ दृष्टिकोण जन्माउन सक्छ । त्यस्तै विक्रम संवत् २०६३ मा चाक्चाकुर चाडको उदय भयो । यसको गर्भधारणचाहिँ नेपाल किरात कुलुङ संघले गरेको देखिन्छ । २०६३ देखि चाक्चाकुर चाड
एउटै फूलमा जटामसीको भाले र पोथी
नेपालको हिमाली भेगमा समुद्र सतहबाट ३,००० देखि ४,५०० मिटरसम्मको उचाइमा चट्टानी क्षेत्र (ढुंगा नै ढुंगा) भएको चिमाल र धुपीको बुट्यानछेउछाउ अलि चिसो र ओसिलो स्थानमा जटामसी वर्षैभरि पाइन्छ । जमिनभित्र
सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संसद् विभटन गरेकी छन् ।
संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिफारिस
काठमाडौं । आइतबार बिहान बिहान ९ बज्दै थियो । ४५ मिनेट समय राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाई संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा
अर्काको किताब हुबहु सारेर लेखक
पुस्तक लेखनले एक निश्चित उद्देश्य बोकेको हुन्छ । पुस्तक लेख्दा लेखकले निश्चित पाठकवर्ग वा समुदायलाई लक्षित गरेर लेख्छ । पुस्तक लेख्नुको मूल उद्देश्य विभिन्न लेखकले लेखेको पुस्तकबाट पाठक वर्गले प्राप्त
अमेरिकी राष्ट्रपतिले कोठा नपाउँदा
राष्ट्रपति भन्नासाथ कस्तो महँगो जीवनपद्धति होला भन्ने हामीलाई लाग्छ । अझै अमेरिकाजस्तो मुलुकको राष्ट्रपतिको लवाइ, खुवाइ तथा बसाइ कस्तो महँगो होला ? उनीहरूको विलासिताप्रति हामीलाई जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
हो चि मिन्ह अर्थात् माइला दाइ
भियतनामी कम्युनिस्ट नेता हो चि मिन्हको जस्तै जुँगादाह्री । संघर्षको कथा पनि त्यस्तै । सबैका प्यारो । सबैका आदरणीय माइला दाइ अर्थात् गणेश राई भौतिक रूपमा हामीबीच छैनन् । २०७०
कता हरायो जोरमुरली ?
विशेषतः किरात समुदायले जोरमुरली बजाउने गर्छन् । दुई मुरलीलाई आपसमा जोडेर बनाइने यो मुरली पूर्व–पश्चिम पहाडी भेगका युवाले गोठाला, खेताला, मेलापर्म, घाँस–दाउरा जाँदा बजाउने गर्छन् । यस समुदायका मानिसले विशेषगरी
हलेसी (खोटाङ) । खोटाङको हलेसीमा रहेको हलेसी गुफा प्रवेशद्वारनजिकै १ सय ३७ किलो तामाको त्रिशूल ठड्याइएको छ । शिवरात्रिको अवसर पारेर त्रिधार्मिकस्थल हलेसीमा सो त्रिशूल राखिएको हो । एपेक्स कन्सट्रसन
६१ जना सुत्केरीलाई कुखुराको भाले र घ्यु
बलेवा (बाग्लुङ) । सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिकाले पृथक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले कहिले घ्युको ठेकी त कहिले भाले सुत्केरी र गर्भवतीलाई बाँड्दै आएको छ
बेलायतमा सम्मानित नेपाली सेनाका अधिकृतलाई पुरस्कारस्वरूप तरबार
बेलायत । नेपाली सेनाका एक अधिकृतलाई बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान दिइएको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका धादिङनिवासी २१ वर्षीय पिटर थापा नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टका रूपमा कार्यरत छन् । बेलायतको स्यान्डहस्टमा रहेको
कान नसुन्ने, बोल्न नसक्नेका लागि ग्लोब र मोबाइल
कान नसुन्ने र बोल्न नसक्नेका लागि लेखपढ गर्न र बोल्न ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषाको विकास गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरूका लागि लेदपढ गर्न धेरै सहज भएको छ । युक्रेनका
घरभित्र कृत्रिम बादल
छेक्यो–छेक्यो देउराली डाँडा, हुस्सु र कुहिरोले जहाँ गए पनि छाडेन मलाई मायाको धुइरोले । देउरालीडाँडामात्रै होइन, अब घरभित्रको कोठा पनि हुस्सु र कुहिरोले छेक्न सकिने प्रविधि आविष्कार भएको छ ।
काँडेतारले घेरिएको क्षेत्रभित्र एउटा सुन्दर भवन । अनि भर्खरेै तोतेबोली बोल्दै गरेका स–साना बालबालिका । चुकुल लगाइएको भवनभित्र उनीहरू आ–आफ्नै तालमा छन् । जोकोहीलाई भित्र पस्न मनाही गरिएको त्यस भवनमा
बेलायती सेनामा भर्ती भएर अरूको भन्दा उच्च शैलीमा जीवन बिताउने रहरले थुपै्रले देखेका हुन्छन् । बेलायती सेनामा भर्ना हुन पोखराबाट गेटपास पाउनुपर्छ । बेलायती सेना र सिंगापुर पुलिस बन्ने सपना
हलेसी (खोटाङ) । स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोग, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका दुर्छिम खोटाङ, कारितास नेपालको सहकार्य र नवकिरण सेवा समाज नेपालको समन्वय तथा सहजीकरणमा सञ्चालित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत हलेसीमा कृषि सामग्री
हलेसी (खोटाङ) । त्रिधार्मिक धाम हलेसी आठ महिनापछि खुला गरिएको छ । २०७६ चैत ६ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हलेसी मंसिर १६ गतेदेखि खुला गरिएको हो । किरात, हिन्दु
हलेसी (खोटाङ) । पण्डित शम्भु तिम्सिनाले मन्त्र पढ्न थाले । सांसद विशाल भट्टराईले अस्पताल शिलान्यासका लागि खनिएको खाल्डोमा इँटा र सिमेन्टको मसला हाले । लगत्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन
काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा संवत् २०५२ भदौ २६ गते पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । श्रीप्रसाद देउवा र द्रौपदीदेवी देउवाका जेठा छोरा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बहुदलीय प्रजातन्त्र आगमनपछि चारपटक